Bere a Obi a Ɔbɛn Wo Pa Ara Awu
Ɔwɛn-Aban | No. 2 2019
KENKAN WƆ Acholi Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Armenian Aukan Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bassa (Cameroon) Batak (Karo) Batak (Toba) Belize Kriol Bengali Betsimisaraka (Southern) Bicol Bislama Boulou Brazilian Sign Language Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chin (Hakha) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chuukese Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Cuban Sign Language Czech Dangme Danish Digor Douala Drehu Dutch Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Garifuna Georgian German Gitonga Greek Greenlandic Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hmong (White) Hungarian Iban Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Kabiye Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kekchi Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Korean Sign Language Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Latvian Lhukonzo Lingala Lithuanian Low German Luganda Lunda Luo Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Marathi Marshallese Mauritian Creole Mazatec (Huautla) Mbunda Mizo Mongolian Moore Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Navajo Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngangela Nias Niuean Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Persian Polish Ponapean Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Rarotongan Romanian Ronga Runyankore Russian Rutoro Samoan Sango Saramaccan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tarascan Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tok Pisin Tongan Totonac Tshwa Tsonga Tswana Turkish Tuvaluan Twi Tzeltal Ukrainian Umbundu Urdu Urhobo Uruund Uzbek Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Welsh Wolaita Xhosa Yapese Yoruba Zande Zapotec (Lachiguiri) Zulu
“Bere a me nuabarima panyin wui mpofirim no, na minhu nea menyɛ. Abosom bi akyi no, sɛ me nua no ho asɛm besi me tirim a, na mayare. Etwaa me nsono mu pa ara. Ɛtɔ da a, na me bo fuw ma mibisa me ho sɛ, adɛn nti koraa na me nua no wui? Afei nso, nea ɛhaw me pa ara ne sɛ, mannya bere pii ne no ammɔ ansa na ɔrewu.”​—Vanessa, Australia.
SƐ WOAHWERE obi a ɔbɛn wo pa ara a, ebia wo nso, ama woafa yaw ne ateetee pii mu. Ebia wudii awerɛhow, woto w’ani a na ɛntɔ obiara anim, na na wugye wo ho a ennye. Ebetumi nso aba sɛ, asɛm no maa wo bo fuwii, ɛma wubuu wo ho fɔ, na ehu kaa wo. Ebi mpo a, ama asetena afono wo.
Nya awerɛhyem sɛ, wudi awerɛhow ma ɛkyɛ mpo a, ɛnyɛ bɔne. Nea ɛkyerɛ ara ne sɛ, nea owui no, na wopɛ n’asɛm pa ara. Nanso yemmisa sɛ, da bi bɛba a w’awerɛhodi no ano bɛbrɛ ase anaa?
NEA ƐBƐBOA WO AMA WOAGYINA ANO
Sɛ ɛte sɛ nea biribiara ntumi nkyekye wo werɛ a, ebia nyansahyɛ a edidi so yi bɛboa wo:
NKA W’AWERƐHOW NHYƐ
Ɛsono sɛnea obiara di awerɛhow. Ebinom di awerɛhow kyɛ. Ebinom nso de nkyɛ. Ne nyinaa mu no, sɛ wusu a, ebetumi atew w’awerɛhow so. Vanessa a yɛadi kan aka n’asɛm no kaa sɛ: “Ɛyɛ a, osũ ara na misũ; mepɛ sɛ yaw no nyinaa fi me mu.” Sofía nso nuabea wui mpofirim. Ɔkaa sɛ: “Sɛ midwen nea asi no ho a, ɛyɛ me yaw pa ara. Ɛte sɛ nea woawae wo kuru bi anim na woremia. Nanso sɛ ɛyɛ wo yaw sɛ dɛn koraa a, ɛno ara na ɛbɛma kuru no awu.”
KA W’ASƐM KYERƐ NKURƆFO
Ɛwom, ɛtɔ da a wobɛpɛ sɛ wo nkutoo tena wo baabi dwen wo ho. Nanso, sɛ wo nko ara wokyekyere w’awerɛhow soa a, wo kɔn mu bebu. Jared a wadi mfe 17 no papa wui, na nea ɔno nso kae ni: “Ná meka m’asɛm kyerɛ afoforo. Ebetumi aba sɛ mantumi ankyerɛkyerɛ me nsɛm mu yiye, nanso ɛyɛ me dɛ sɛ mitumi kaa m’asɛm kyerɛɛ nkurɔfo.” Janice a yɛkaa ne ho asɛm wɔ asɛm a edi kan no mu no de kaa ho sɛ: “M’asɛm a meka kyerɛɛ nkurɔfo no maa me werɛ kyekyee pa ara. Mihui sɛ nkurɔfo te me ase, enti mante nka sɛ mayɛ ankonam.”
MA AFOFORO MMOA WO
Dɔkota bi kaa sɛ: “Obi biribi wu na sɛ ntɛmpa no ara ɔma n’abusuafo ne ne nnamfonom boa no a, ɛma otumi gyina n’awerɛhow no ano na ammu amfa no so.” Ma wo nnamfo nhu nea wobetumi ayɛ aboa wo; ebia wɔpɛ sɛ wɔboa wo, nanso ɛyɛ a wonhu nea wɔnyɛ mfa mmoa wo.​—Mmebusɛm 17:17.
Ɔbea bi a wɔfrɛ no Tina kaa sɛ: “Kokoram kum me kunu mpofirim, enti na onni hɔ bio na maka m’asɛm akyerɛ no. Wei nti Onyankopɔn na meka me tirim asɛm nyinaa kyerɛ no! Ade kye biara a, ansa na mɛyɛ biribiara no, mebɔ mpae srɛ no sɛ ɔmmoa me ma minnyina tebea no ano. Sɛnea Onyankopɔn boaa me no de, merentumi nka ne nyinaa.” Tarsha nso, bere a odii mfe 22 na ne maame wui. Ɔkaa sɛ: “Ná mekenkan Bible daa de kyekye me werɛ. Sɛ mekenkan a, minya biribi dwinnwen ho de hyɛ me ho den.”
FA W’ADWENE BU BERE A WO DƆFO A WAWU NO BƐSƆRE
Tina toaa n’asɛm no so sɛ: “Mfiase no de, owusɔre anidaso no ankyekye me werɛ, efisɛ na mepɛ sɛ mesan nya me kunu no saa bere no ara, na na me mma mmarima no nso hia wɔn papa. Seesei mfe nnan atwam, nanso owusɔre no ara na m’ani da so. Ɛno ara na akurakura me abesi nnɛ. Ɛyɛ a mede m’adwene bu sɛ masan ahu me kunu no bio. Wei ma minya abotɔyam, na ɛma m’ani gye!”
Ɛrentumi mma sɛ w’awerɛhow no bɛtew akɔ prɛko pɛ. Nanso Vanessa asɛm yi betumi ama wo awerɛhyem. Ɔkaa sɛ: “Ebia ɛbɛyɛ wo sɛ w’awerɛhow no to rentwa da, nanso nkakrankakra ɛbɛbrɛ ase ama wo ho atɔ wo.”
Kae sɛ, ɛwom sɛ w’ani bɛkɔ so agyina wo dɔfo a wawu no de, nanso ɛnsɛ sɛ woma w’abam bu. Onyankopɔn dɔ wo, na ɔbɛboa wo ama woanya nnamfo a wɔbɛma w’ani agye. Ɔbɛma wo akomatɔyam. Na ɛrenkyɛ koraa, Onyankopɔn benyan awufo. Ɔpɛ sɛ wosan yɛ wo dɔfo a wawu no atuu. Saa bere no, yaw biara a ɛwɔ wo komam no betu ayera koraa!
Bible Mu Nsɛm a Ebetumi Aboa Wo
Osũ a woresu ne awerɛhow a woredi no, Onyankopɔn nim ne nyinaa.
Bible kyerɛwfo bi ka kyerɛɛ Onyankopɔn sɛ: “Fa me nusu gu wo kotoku mu. Enni wo nhoma mu anaa?”​—Dwom 56:8.
Wubetumi aka wo komam asɛm akyerɛ Onyankopɔn.
‘Mihwiee me dadwen guu Onyankopɔn anim daa. O Yehowa, * misu mefrɛɛ wo sɛ boa me.’​—Dwom 142:2, 5.
Wubetumi anya anidaso.
‘Nnipa bɛsɔre afi awufo mu.’​—Asomafo Nnwuma 24:15.
Onyankopɔn ahyɛ bɔ sɛ, ɔbɛsan anyan nnipa pii a wɔawuwu no, efisɛ n’ani agyina wɔn. *​—Hiob 14:14, 15.
^ nky. 24 Bible ma yehu sɛ Yehowa yɛ Onyankopɔn din.
^ nky. 27 Sɛ wopɛ sɛ wuhu owusɔre no ho nsɛm pii a, hwɛ Dɛn na Yebetumi Asua Afi Bible Mu? nhoma no ti 7. Yehowa Adansefo na wɔyɛe. Wubetumi nso atwe bi wɔ www.jw.org/tw a wuntua hwee.
Sɛ Obi a Ɔbɛn Wo Pa Ara Wu a, Ɛsɛ Sɛ Woma W’abam Bu Anaa?
Bere a Asetena Afono Wo
Bere a Atoyerɛnkyɛm Bi Asi
Bere a Wo Hokafo Afa W’akyi
Bere a Yare Bi a Emu Yɛ Den Abɛtena Wo So
Bere a Wote Nka Sɛ W’anidaso Nyinaa Asa
Nea Enti a ƐNSƐ SƐ Woma Asetena Fono Wo
‘Odwen Wo Ho’
Text Baabi a wubetumi atwe nneɛma akenkan ƆWƐN-ABAN No. 2 2019 | Asetena Afono Wo Anaa?
Audio Baabi a wubetumi atwe nneɛma abɔ atie ƆWƐN-ABAN No. 2 2019 | Asetena Afono Wo Anaa?
No. 2 2019 | Asetena Afono Wo Anaa?
ƆWƐN-ABAN No. 2 2019 | Asetena Afono Wo Anaa?
Sɛnea Wubegyina Awerɛhow Ano—Nea Wubetumi Ayɛ Nnɛ